VIDEO | RayHaber
Mukati meHaydarpaşa Chitima cheChitima Chenguva Yokutanga; Mu2010, iro basa rekudzorera paHaydarpaşa Railway Station, yaive nemoto padenga uye ikakanganisika, yakapera kusvika pakakura. TRT kekutanga mamiriro ekupedzisira chimiro chechiteshi chivakwa [More ...]
Turkish Airlines Dreamliner yeNew Generation Bhizinesi Kirasi; Boeing 787-9 ine hurefu, mapatya enjini uye yakafara muviri unozivikanwa seDoorliner. Yakanyanya kunyorova zvemukati [More ...]
X-ray zvishandiso, izvo zvisinga shande pamagwaro epasi peiyo Ankara, zvave zvichishanda kubva svondo rapfuura. Munguva yepamusoro maawa ekupfuura uye motokari yekufambisa ine mashandiro emidziyo, yekuchengetedza matanho ari mumigwagwa [More ...]
Meya Seçer Anopa Zuva reMersin Metro; Mersin Metropolitan Municipality Meya Vahap Seçer ndiye aive muenzi we "Alarm Clock" chirongwa na İsmail Küçükkaya paFOX TV skrini. Sachigaro Seçer, Metro [More ...]
Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan, TUBITAK SAGE yakagadziriswa neInvisible Air-Air Missile Bozdogan yekutanga inotungamirwa kupfura muedzo pane ndege yakanangwa yapedza kubudirira kuzivisa. TAF ichipinda muhombodo Mari dzemamiriyoni emadhora kubva kunze [More ...]
Kufarira kwakanyanya muCybertruck naElon Musk
Gadzira magetsi emagetsi eAmerican Tesla akaunza yaro nyowani nyowani Cybertruck pickup rori vhiki rapfuura. Maitiro emota, girazi rakaputswa panguva yekuratidzira yaive chirongwa chezuva rekutanga. Pamusoro peizvi zvese, [More ...]
Fog Yakabata Istanbul Airport, Ndege Yakatemwa Mumhepo Kwemaminitsi
Istanbul Airport yakaronga kuita bhizinesi nekuda kwehusimbe, hwaibata mangwanani neChipiri mangwanani, ndege dzakatenderedza kwenguva yakareba mumhepo. Zvisinei nekunonoka, ndege dzese dzakakwira zvakanaka panhandare yendege. AirportHaber yakataura [More ...]
Minister Varank Nhunzi Nekutanga Dzimba Dzinopisa Mhepo Balloon
Minister Varank Nhunzi neKutanga Dzimba Dzinopisa Mhepo Balloon; Gurukota rezvemaindasitiri nehunyanzvi, Mustafa Varank, Nevsehir akagadzira yekutanga hot air balloon yakabhururuka pamusoro kwedenga reKappadocia. Minister Varank, vachishanda mudunhu [More ...]
Mhuka Inopararira Kugara Inochenjerera kubva kuMetro Istanbul!
Vhidhiyo Kugadzira Kunyemwerera kubva Istanbul Metro; Metro Istanbul, mubatanidzwa weIstanbul Metropolitan Municipality, akagoverana vhezheni kubva muayo nhoroondo yenhau ichitaura kuti yaisafanirwa “kuparadzira ında pakutakura kwevanhu. Kugoverwa kubva kune yeMetro Istanbul's's official account [More ...]
Veruzhinji Kutyisidzira Kudzivisa Sapanca Ropeway Project
Kutyisidzira kune Vanhu Vanoramba Sapanca Ropeway Project 'Tinosvina Musoro Wako'; Munharaunda yeKırkpınar yakavakidzana yeSapanca, mauto ekudzivirira akaramba mutengo wemuti akatyisidzira kuti sık kuruma musoro wako ar. Inodikanwa kuti iitwe pedyo neSapanca's Kırkpınar nharaunda [More ...]
Zvitima zviviri Collide muBangladesh: 15 Vakafa, 58 Vakakuvadzwa
Zvitima zviviri Collide muBangladesh: 15 Vakafa, 58 Vakakuvadzwa; Mu03.00 panguva yemunharaunda nezuro husiku muBangladesh, chitima chevatakuri chinobva kuChittagong munzvimbo yeBrahmanbaria kumabvazuva kweDhaka [More ...]
16 Yakakuvadza Vaviri Vakakwira Chitima Crash muIndia
Vaviri Vakakwira Chitima Kukanganisa muIndia 16 Vakakuvadzwa; MuIndia, chitima chemapasita chakadzika uye chakarova chimwe chitima chevafambi. Vanhu ve16 vakakuvara mutsaona yechitima muHyderabad. Tsaona yeguta reHyderabad muTelangana [More ...]
Mitengo yeMarmaray Tiketi uye Marmaray Expedition Nguva
Mitengo yeM tikiti yeMarmaray neMarmaray Expedition: Kuvakwa kweMarmaray basa, iro richabatanidza zvitima kumativi ese eBosphorus, kuri kuenderera mberi nekukurumidza. Njanji nzira dzinopfuura pasi peBosphorus [More ...]
Halkalı Gebze Marmaray Anomira uye Chirongwa: Marmaray, iyo purojekiti inobatanidza European uye Anatolian Side yeIstanbul Halkalı Iwe unogona kuwana ruzivo rwese pamusoro pekumira uye [More ...]
Today muna History: December 10 1923 Turkey National Railways
Mamiriro Ekupfuura Mamiriro ezvinhu mu Ankara Sivas High Speed ​​Chitima Mutsetse